Vavaka ho an'ny orinasa. ? Asa sy be dia be | Masindahy Jude Thaddeus
Ny vavaka ho an'ny fandraharahana el tontolo Ny ara-panahy dia zava-misy izay tsy afa-mandositra na tsy raharahiantsika, izany no mahatonga antsika rehefa manomboka ezaka vaovao isika dia tsara ny manao a vavaka ho amin 'ny fandraharahana Efa hanomboka isika
Toerana fitahiana sambatra, mba hisy angovo tsara mikoriana mandrakariva. Afaka mangataka fanambinana isika ary izay rehetra miditra ao amin'ny orinasanay dia mahatsapa fiadanana sy filaminana.
Mivavaka ho an'ny orinasa iray dia tsy voatery ho tonga rehefa manomboka, dia afaka mivavaka ho an'ny orinasa izay efa misy fotoana an-tongotra.
Ny zava-dehibe dia ny hitahy azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina ary mino fa manana hery ny vavaka ataontsika.
Amin'ireo toe-javatra ireo izay tsy antsika ny orinasa fa avy amin'ny namana na havana, afaka mivavaka koa isika mba hahasoa sy hiroborobo tokoa ny raharaham-barotra.
1 Ny vavaka ho an'ny raharaham-barotra Inona moa izany?
1.1 Vavaka mba hitahy ny asa
1.2 Ho an'ny asa sy ny asa be dia be
1.3 Vavaka ho an'i Md Jude Thaddeus ho amina raharaham-barotra
Ny vavaka ho an'ny raharaham-barotra Inona moa izany?
Ny vavaka ho an'ny orinasa dia zava-dehibe satria amin'ny alalany izany no ahitantsika ny lalana tokony halehan'ny asa, tsarovy fa matetika isika te hanao zavatra iray rehefa tena mila manao zavatra hafa kely ary izao dia rehefa amin'ny alàlan'ny vavaka dia azontsika atao ny adiresy ilaintsika handray fanapahan-kevitra tsara ary mandeha amin'ny lalana marina.
Isika dia mahafeno fepetra ara-panahy hifandray amin'Andriamanitra sy amin'ireo olo-masina, tsy afaka miandry ny hafa tonga hisaotra ny antsika isika, mazava ho azy fa afaka miantehitra amin'ny namana na mpianakavy isika fa andraikiny manokana ny andraikitra ara-panahy, koa mila mianatra mitoky isika Ny vavantsika manokana
Tsy afaka mangataka ny fanambinana ara-bola isika raha tsy mino fa azo atao ny hahatratra izany, mihoatra noho ny mianatra hivavaka.
Tokony hanana finoana isika fa ny vavaka ataontsika dia ho tonga any an-danitra ary hahatanteraka ny tanjona hangatahintsika izany.
Miandry valiny avy amin'ny antsika vavaka mety ho sarotra indrindra izany fa Raha matoky isika dia azo antoka fa handray izay angatahintsika be dia be.
Vavaka mba hitahy ny asa
Ry Tompo malala, mangataka fanampiana aminao aho hanomboka ny asako manokana. Ianao no mpiara-miasa mafy indrindra amiko sy mpiara-miasa tsara indrindra amiko.
Miangavy anao aho hiara-miditra amin'ity fitsangatsanganana vaovao ity hahafahako mahomby. Ho ahy dia ny fianakaviako sy ny mpanjifako izay hotompoiko. Omeo ahy ny herinao amin'ny fitsarana tsara.
Ny fahendrenao sy ny fitarihanao ho an'ny fandraharahako dia miroborobo sy manao ny tsara. Ho anay rehetra amin'ny anaranao any an-danitra.
Ny be dia be, ny fahafehezana, ny torolàlana handraisana fanapahan-kevitra, ny hevitra vaovao ary ny fangatahana maro hafa azontsika apetraka eo anoloan'Andriamanitra izay afaka manao ny zavatra rehetra mba hanomezany antsika famindram-po.
Tsy misy mahalala tsara noho ianao ny filàna mety hitranga amin'ny asanao, miresaka amin'Andriamanitra ary atolory azy ny tsirairay amin'izy ireo.
Tsarovy fa ny vavaka dia miresaka amin'Andriamanitra, avy eo dia miresaka aminy ary aza adino ny hanome azy fotoana hamaliana, hamindrana ireo sombin-javatra tianao.
Tsy ny zava-drehetra no hitranga, arakaraka ny tiantsika hitranga, saingy raha matoky ny Tompo isika dia azo antoka fa na inona na inona mitranga dia ho fitahiana ho antsika.
Ho an'ny asa sy ny asa be dia be
Ry Tompo malala, mangataka fanampiana aminao aho hanomboka ny asako manokana. Ianao no mpiara-miasa mafy indrindra amiko sy mpiara-miasa tsara indrindra amiko. Miangavy anao aho hiara-miditra amin'ity fitsangatsanganana vaovao ity hahafahako mahomby.
Ho ahy dia ny fianakaviako sy ny mpanjifako izay hotompoiko. Omeo ahy ny herinao amin'ny fitsarana tsara.
Betsaka ny olona Manomboka orinasa vaovao ary maniry ny hanana be dia be izy ireo nefa tsy takany fa tonga tsikelikely izy io rehefa miasa isika.
Noho izany, ny mangataka be dia be nefa tsy miasa dia manontany tena foana. Ny Baiboly dia mampianatra antsika fa ny finoana tsy misy asa dia maty. Koa tsy maintsy mangataka amin'Andriamanitra hanome antsika be dia be isika, fa tokony hiasa ho antsika koa.
Tsy maintsy mianatra mampihatra ny fehezanteny isika, tsy afaka mangataka zavatra tsy tena ilaintsika, mangataka zava-tsoa fa tsy ara-toekarena.
Ohatra ny fahendrena, miaraka amin'izany dia afaka hahatratra be dia be isika.
Vavaka ho an'i Md Jude Thaddeus ho amina raharaham-barotra
Masindahy Jude Thaddeus,
Amin'izao fotoana izao dia mangataka anao izahay hifona eo anatrehan'ny Raintsika any an-danitra,
Ho an'ny fahombiazan'ny orinasantsika,
Loharanom-piasana ho an'ny maro sy sakafo ho an'ny fianakaviantsika,
Fenoy ny sisin'ny fitahiana rehetra,
Ary amin'izay rehetra miasa ao aminy,
Ny asantsika dia hotahian'ny Avo Indrindra,
Ary mahafinaritra ny masony.
Md Jude Thaddeus,
Aza avela ao anatin'ity toeram-piasana ity,
Ekena ny tsolotra na vokatry ny asa ratsy sasany,
Enga anie ka hajaina sy hajaina izay rehetra ataontsika,
Enga anie isika hiasa am-pahatsorana,
Fiampangana ampy fotsiny ary fanompoana am-pitiavana ireo rahalahintsika,
Ampio izahay hahatratra ny tanjona napetraka amin'ny fampandrosoana ny orinasa sy ny varotra.
Mangataka aminao izahay mba hampiorina ao aminay ny fitiavan'Andriamanitra,
Ho an'ireo rehetra miasa amin'ity toerana ity,
Ary enga anie ny fitiavan'Andriamanitra sy ny ankohonantsika,
Ireo manampy antsika hanao asa mendri-kaja,
Misaora ny eritreritsika, ny ataontsika ary ny teninay,
Miangavy anao amin'ny anaran'ny Mpamonjy anay, Amena.
Ny tenin'Andrimanitra dia mampianatra antsika fa tsy maintsy miroborobo isika toy ny fanahin'ny fanahintsika ary mitady ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany ary ny zavatra hafa rehetra, koa ampifantohantsika ny herintsika rehetra amin'ny famahanana ny fanahintsika, amin'ny fomba anomezantsika antoka fa ho avy ny fanambinana eny an-dàlana satria mampanantena Andriamanitra.
Aoka isika hatoky ny vavaka sy ny asa mba hahatongavan'izany haingana.
Azonao atao ve ny mivavaka mihoatra ny vavaka mahery noho ny asa aman-draharaha sy ny harena be dia be ho an'Andriamanitra sy Masindahy Jude Thaddeus?
Afaka mivavaka eny ianao.
Ny zava-dehibe dia ny mivavaka miaraka amin'ny finoana be ao am-ponao.
Raha manana finoana ianao ary raha mino fa hanatsara ny zava-drehetra ianao dia afaka mivavaka tsy misy olana.
Tsarovy fotsiny mino fa hihatsara ny zava-drehetra!